Wasiirka Arimaha Dibada Kenya oo Maanta imaanaysa Muqdisho
HomeWararka SomaliyaWasiirka Arimaha Dibada Kenya oo Maanta imaanaysa Muqdisho
August 8, 2021 Wararka Somaliya, Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Wasiirka Arrimaha Dibadda Raychelle Omamo ayaa la filayaa inay maanta booqasho ku timaado magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya
Cs Omamo wasiirka arrimaha dibbada Kenya ayaa waxa ay inta ay ku sugan tahay caasimada dalka ay kulamo la qaadan doontaa mas’uuliyiin ka tirsan dowlada Soomaaliya oo uu ka mid yahay Wasiirka Arrimaha Dibbada Maxamed Cabdirizaq,ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday ee Farmaajo.
Sida ay qoreen qaar kamid ah saxaafada Kenya oo soo xiganaysa saraakiila aysan magacaabain oo ka tirsan wasaarada arrimaha dibadda Soomaaliya, booqashada Omamo oo ah tii ugu horeysay ee ay Soomaaliya ku timaado waxana ay la xiriirtaa sidii ay ugala hadli lahayd dowlada Soomaaliya arrimo la xiriira muranka badda ee ka dhexeeya labada wadan.
Kenya ayaa 19 -kii Luulyo, 2021 -kii ka codsatay Guddiga Midowga Afrika in ay bixiyaan kaalmo farsamo oo la xiriirta arrimaha xuduudda ay la wadaagto Soomaaliya iyada u dirtey qoraal.
Xiriirka Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya ayaa xumaa bilihii la soo dhaafay hase yeeshee dhexdhexaadin ay ka gashay dowlada Qadar ayaa sababay in labada dal ay dib u soo ceshtaan xiriirkooda.
Ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dowlada Soomaaliya iyo dowlada Kenya oo la xiriira booqashada Wasiirka Arrimaha Dibadda Kenya.
Hase yeeshee Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa Xeer Madaxweyne uu xalay soo saaray waxa uu ugaga mamnuucay xukuumada Soomaaliya inay gasho heshiis caalami ah oo dhinac walba saameynaya.
Waxaana shaki la geliyay in xeerka uu yahay mid ka hor istaagaya xukuumada inay heshiisyo la gasha dowlada Kenya.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa la sheegay inuu kulamo la yeelanayay madax ka tirsan xukuumada Kenya isagoo kulan aan la shaacin kula yeeshay Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta magaalada London dhamaadkii bishii hore.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaare Rooble uu boooqasho rasmi ah ku tagayo magaalada Nairobi ee dalka Kenya maalinta Talaadada ah ee soo socota.
Madaxweynaha Waqtiga ka dhamaaday ee Farmaajo oo Hay’adaha Dowladda Faray inaan Heshiisyo aan La geli karin
Dowlada Sacuudiga oo Cumrada u furay Muslimiinta caalamka iyo hal Shardi oo lagu xiray